Isku-darka Microsoft Teams Google Ads
clever ads Ka soo gal kooxaha MS Teams
Ka soo gal kooxaha MS Teams
Isku-darka Microsoft Teams Google Ads , Xayeysiiska Microsoft &amp; Xayeysiiska Facebook
Hesho ogeysiisyo khaas ah tooska ah ee Microsoft Teams .
Hayso garaafyo si gaar ah u sameeyey xisaab advertising aad.
Jadwalka si ay u helaan tubta aad labada maalin kasta ama todobaadle ah.
Kudar Microsoft Teams
Sida aan jeclahay in la yidhaahdo, aad noqon doonaa waqti ku filan oo lagu badbaadinayo inay ku raaxaystaan ​​kafeega in waaberiga inta aad u jeclahay! ☕
Badbaadiyay waqtiga aad!
Badbaadso waqtigaaga qaaliga ah adoo arkaya dhammaan Google Ads ugu muhiimsan ee Google, Xayeysiiska Bing iyo cabbirka Facebook Ads hal meel. Xidh qaar ka mid ah tabsyadaas!
Abaabulaan iyo hawshiinna intii aad maalin walba si fiican
Isku-dhafkan, waxaad u adeegsan kartaa jaangooyooyin, garaafyo, iyo digniino si aad u qiimeyso horumarka ololahaaga, dhammaan adoo adeegsanaya Microsoft Teams !
Si buuxda oo lacag la'aan ah!
Clever Ads , oo ka duwan aaladaha kale ee la midka ah ee suuqa, uma baahna lacag aad ku isticmaasho.
Sifee xisaabaadka aad doorbideyso ee ads ah oo aad ku heleyso waxqabadka kooban jaangooyooyin iyo garaafyo.
Soo gal shaashaddaada oo awood u yeelatid inaad shakhsi ahaan u habeysid sida aad uga hesho mitirkaaga adoo adeegsanaya Microsoft Teams . Sifee koontooyinka aad rabto inaad aragto, jadwal u sameyso warbixinnadaada oo aad digniintaada habayso .
Maxaad ugu rakibaysaa barnaamijka Clever Ads ah Microsoft Teams ?
Qiyaaso muhiim ah ayaa toos looga heli doonaa iyada oo loo marayo Microsoft Teams . Qiyaasahaani waxay noqon karaan aragti, qasabno, iyo inbadan, dhammaantood oo Google Ads iyo Xayeysiiska Bing
Isticmaal garaaf si muuqaal dhawrtaan oo horumar ah ee mid ka mid ah tubta aad. Hadday tahay reebaya, kharashka, ama heerka qaab beddelidda.
U leedahay inaad doorato si aad u hesho maalin kasta ama todobaadle ah soo koobikaro, oo waxaan ka dhigi dadweynaha kooxda si ay u arkaan, ama indhahaaga oo kaliya.
Waxaan ku siin doonaa talooyin ku saabsan hagaajinta Google Ads istiraatiijiyad markii aad codsatid. Waxaan ka siin karnaa talo ku saabsan ololahaaga sida hagaajinta miisaaniyadeeda, wax ka beddelka bartilmaameedka, iyo inbadan.
In ku saabsan daqiiqadii, waxaad ku dari kartaa Clever Ads for Microsoft Teams in aad xisaabta si toos ah.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa guji badhanka "Add to Microsoft Teams " oo waad heli doontaa
Gal si aad account aad advertiser ee
Gal si aad Google, Facebook, iyo / ama Microsoft Account in ay ku xiran tahay account advertising aad
Ka dib doorashada account aad la doonayo, si xor ah u beddelaan kuwa kale wax waqti kasta
Ka faa'ideyso sifooyinka badan ee app
Hel oo dhan wararka kor ku xusan muuqan oo ku haboon
Maxay app this dhab ah sameeyaan?
Ujeedada barnaamijkan ayaa ah in noloshaada loo fududeeyo oo aan jecelnahay inaan "kuu keydinno waqti kugu filan oo aad ku raaxeysato kafeegaas subaxa aad aadka u jeceshahay." Markaad isku xidho Google Ads aad rabto inaad la shaqeyso, waxaad bilaabi kartaa inaad hesho metricyada iyo garaafyada tooska ah ee Slack ama Microsoft Teams chat adigoo si fudud ugu qoraya bot-ka. Sidan, waxaad badbaadinaysaa qaar ka mid ah waqtigaaga qaaliga ah maadaama aanad u baahnayn inaad gasho isku-xirka Google Ads
DHAGAYSO DHAWAAN : Dareem kalsooni badan leh kootooyinkaaga Google Ads Clever Ads xayeysiiska ayaa ku ogeysiin doona haddii ay jiraan wax aan caadi aheyn oo ka dhacaya koontadaada.
Maxay tahay sababta aan ugu Google Ads koonto?
Ma aaminbaa in la xirayo Google Ads koonto?
Markaad gasho koontadaada Google, waxaan keydineynaa calaamadda gelitaanka ee keydkeena macluumaadka qarsoon Furaha waxaa adeegsada kaliya Clever PPC API waligiisna lama wadaagto Slack ama Microsoft Teams . Markii aan ka helno xogta ku habboon Google Ads , waxaan u beddeleynaa fariin qaabeysan oo ah Slack ama Microsoft Teams , waxaanna u dirnaa isla sheekada aad amarka ku qortay.